कटहरीमा गाउँपालिकास्तरीय डोरीतान प्रतियोगिता सम्पन्न
विराटनगर, पुस ६–मोरङको कटहरीमा गाउँपालिकास्तरीय डोरीतान प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । परिवर्तनका लागि हातेमालो कटहरीको आयोजनामा पुरुष र महिला छुट्टा् छुट्टै समुहमा डोरीतान प्रतियोगिता सम्पन्न भएको हो ।
महिला तर्फको डोरीतानमा वडा नं. ५ लाई पराजित गर्दै १ ले उपाधी जितेको छ । त्यसैगरी पुरुष तर्फको डोरीतानमा वडा नं. ४ लाई पराजित गर्दै १ नं. वडाले उपाधी जितेको छ । प्रतियोतिामा विजेत ाबनेको टिमले नगद ११ हजार, ट्रफि, मेडल र प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ ।
पुरुष डोरीतानको उद्घाटन् कटहरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकुमार कामतले गरेका थिए । त्यसैगरी महिला डोरीतानको उद्घाटन् सोही गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष मञ्जिता सरदारले गरेकी थिइन् । प्रतियोगितामा वडा न १, ३ र ४ बाट महिला र पुरुष दुवै टिमको सहभागिता थियो ।
त्यस्तै प्रतियोगितामा वडा न ५ बाट महिला र आयोजक टिमबाट पुरुष टिमको सहभागिता रहेको थियो । गाउँपालिका अध्यक्ष कामतको प्रमुख आतिथ्यता, नेकपा प्रदेस कमिटी सदस्य मृत्युन्जय कुमारको विशिष्ट आतिथ्यामा सम्पन्न भएको प्रतियोगितामा सवै वडाका वडाअध्यक्षहरुको उपस्तिी रहेको थियो ।
सिँघिया खोला सरसफाई महाअभियान : कठ्यांग्रिदो जाडोमा पनि खोला सफाइमा सयौँ सहभागि